प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी संगठनमा प्रहरी निरीक्षकको रुपमा प्रवेश गरेपछि उनी अब्बल अधिकृतको रुपमा उदाए तर आईजीपी भएको झण्डै २ वर्षमा उनको छवि धुमिल भएको छ ।
खनालले २८ वर्षमा बनाएको छवि आईजीपीको भूमिकामा पुगेपछि धुमिल्लाए । आईजीपीको गलत कार्यशैलीले लामो इतिहास भएको प्रहरी संगठनको विश्वसनीयता र साखमा समेत आँच आएको प्रहरीका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
‘यहाँ काम गर्नेहरूको लेखाजोखा भएन, काम गर्ने अरु तर पाखुरा देखाउने उहाँ । प्रहरी प्रमुख भएका नाताले उहाँले देखाउनुपर्छ तर काम गर्नेलाई पनि त माथि ल्याउनु उहाँको दायित्व हो नि ?’ एक अधिकारीले असन्तुष्टि पोखे, ‘यस्तो क्रियाकलापले त तलका प्रहरी कर्मचारीको मनोबलमा समेत आँच आउँछ नि !’
खनालले ३ महिनापछि माघ २८ गते आईजीपीबाट अवकाश पाउँदैछन् तर जाँदाजाँदै उनको कार्यकाल आलोचित बनेको छ । उनको नेतृत्वमा खस्किएको संगठन र व्यक्तिगत छवि ३ महिनामा सुधार्न सम्भव समेत देखिँदैन । प्रहरी महानिरीक्षक खनालको नेतृत्वमा प्रहरी संगठन विवादित हुने गरी केही चर्चित घटना सतहमा देखिएका छन् ।
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणले आईजीपी खनालको असफलता स्पष्टै देखियो । घटना भएको १६ महिना बितिसक्दा पनि पन्तका हत्यारा प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
२०७५ साउन ११ गते बिहान साढे ९ बजे कञ्चनपुरकी बालिका १३ वर्षीया निर्मला पन्तको शव भेटिएको थियो । साउन १० गते साथी आँचल (रोशनी) बमको घर जान्छु भनेर निस्किएकी निर्मला अर्काे दिन ११ गते उखुबारीमा अर्धनग्न अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन् ।
मुख्य अभियुक्त भन्दै दिलिपसिंह विष्टलाई २०७५ भदौ ४ गते प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्‍यो तर डीएनए रिपोर्ट नमिलेको भन्दै विष्टलाई भदौ २६ गते साधारण तारेखमा छोडेको थियो ।
कुमार पौडेल फेक इन्काउन्टर !
सर्लाहीमा कुमार पौडेलको इन्काउन्टरको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संलग्न प्रहरी कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो । पौडेलको विषयले पनि प्रहरी महानिरीक्षक खनाललाई विवादमा तान्ने काम गर्‍यो ।
गत असार ५ गते सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–२ बस्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपा सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको सर्लाहीकै लालबन्दी नगरपालिका–१ को लखन्देही जंगल नजिकै पर्ने कच्ची सडकको बाँसघारीमा प्रहरीले इन्काउन्टर गरेको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कात्तिक ४ गते नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको पत्रमा इन्काउन्टर भनिएको घटना इन्काउन्टर नभएर हत्या भएको, लाशजाँच प्रकृति मुचुल्का तयार गर्दा मेडिको लिगल दृष्टिकोणबाट समेत त्रुटि भएको जनाएको छ ।
घटनामा संलग्न प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) कृष्णदेवप्रसाद साह र प्रहरी हवल्दारहरू विनोद साह र सत्या नारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो तर हालसम्म पनि निलम्बन गरिएको छैन । पौडेल घटनाले प्रहरी महानिरीक्षकको छविमा धक्का पुगेको जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रहरी मुख्यालयमै अख्तियारको छापा
गत भदौ २० गते अख्तियारको विशेष टोलीले नेपाल प्रहरीको मुख्यालय नक्सालबाट पछिल्ला २ वर्षका खरिदका कागजात नियन्त्रणमा लियो । लत्ताकपडा, सवारीसाधन लगायतका बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा घोटाला भएको आशंकामा अख्तियारले प्रशासन विभाग अन्तर्गत आर्थिक प्रशासन महाशाखा र प्रबन्ध शाखाबाट खरिदका सक्कली कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अपराध अनुसन्धान, ठगी जस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट नै अख्तियारले भ्रष्टाचारको आशंकामा कागजात लैजानुलाई पनि प्रहरी महानिरीक्षक खनालको असफलताको कडीको रुपमा लिइएको छ ।
शक्तिकेन्द्रसँग हिमचिम !
प्रहरी निरीक्षकदेखि नै रमेश खरेलको पछि–पछि बढुवा पाउँदै आएका उनका लागि संगठन प्रमुख बन्ने बाटोमा सबैभन्दा ठूलो बाधक उनै खरेल देखिए । एसएसपीसम्मको बढुवामा पनि उनको ब्याजमा खरेलै अगाडि थिए । लोकप्रियतामा पनि खरेल अगाडि नै थिए ।
डीआईजीमा बढुवा हुँदा पनि यहीँ क्रम कायम भए उनी एआईजीमै घर जाने पक्का थियो । खरेल यूएन मिसनमा गएका थिए, खनाल अपराध महाशाखामा थिए । खरेलले फोहोरी राजनीतिलाई त्यति रुचाउँदैनथे, खनाल शक्तिकेन्द्र मनाउन खप्पिस थिए ।
नेपाली कांग्रेस पृष्ठभूमिका खनाल जुन दल शक्तिमा आयो, त्यसैको निकट भइहाल्थे । गिरिजाप्रसाद कोइराला जीवित रहेसम्म खुलमखुल्ला कांग्रेसी भएका खनाल कोइरालाको निधनसँगै माओवादी अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट भए ।
प्रचण्ड निकट हुन उनलाई प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहालले सघाएका थिए । जति प्रयास गरेपनि खनाल तत्कालीन एमालेको प्रिय हुन सकेनन् ।
खनालको ब्याचबाट कांग्रेसले डीआईजी बनाउँदा बलियो सम्भावना भएका राजेन्द्रमान श्रेष्ठ प्यारालाइसिस भएर उपचारका लागि अस्पतालै भर्ना भए । राजेन्द्र दौडमा नभएपछि कांग्रेसमा उनको विकल्प थिएन । मौकाको राम्रै उपयोग गर्दै खनाल डीआईजी बढुवामा पहिलो नम्बर पाउन सफल भए ।
एमाले–माओवादी सरकारको बेलामा पहिलो नम्बरमा आउन खनालले तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सहायता लिए । एमाले–माओवादीको सरकार भत्किएर कांग्रेस–माओवादी सरकारको बनेपनि उनी आईजीपी हुनेमा ढुक्क थिए तर निर्वाचनमा एकाएक माओवादी–एमाले गठबन्धन बनेपछि उनी हच्किएका थिए । एमाले बलियो भए उनको सम्भावना कम थियो ।
निर्वाचनपछि बहुमत प्राप्त एमाले–माओवादी सरकार बनेपछि आईजीपी बढुवामा कल्पना नै नगरेका पुष्कर कार्की उनको प्रतिष्पर्धी भए । प्रचण्डले फेरि साथ नदिएको भए उनको आईजीपी हुने सपना तुहिसकेको थियो ।